Qaxoontiga (somali) | Dansk Flygtningehjælp
Qaxoontiga - Yaa taageero heli kara?
Hadii aad tahay qaxoonti oo aad sharci deggenaansho ku leedahay Denmark sababta dagaalka iyo dabagalka ee dalkaagii hooyo awgood (xeerka qaxoontiga § 7, xubinta. 1 , 2 iyot § 8), waxaad codsan kartaa in aad hesho taageero aad dalkaagii hooyo ugu noqotid si joogta ah. Shisheeyaha haysta sharciga aadaminimada (xeerka qaxoontiga § 9 b) wuxuu sidoo kale taageero ku heli karaa sharcigan, sidoo kale kuwa lagu keenay qoys ahaan ee qaxoontigu way codsan karaan (xeerka qaxoontiga § 9 c).
Ma heli kartid taageero aad dalkii hooyo dib ugu noqotid, hadii aad qaadatay dhalashada dheenishka.
Waa goaan adag
Qaxoonti ahaan waxa hortaada yaal arimo badan oo ay tahay in aad ka fekerto, ka hor intaanad goaansan in aad dib ugu noqoto dalkaagii hooyo – waxa ka mid ah in ay hubaal tahay in aad dib u noqoto iyo in ay saamayn ku yeelanayso xaaladdaada nafsiga ah.
Waxa kale oo muhiim ah in aad u feejignaato daryeelka aayahaaga, hoyga, waxbarashada, suurtagalada dawaynta iwm. – iyo in aad qoys iyo xidhiidh ku leedahay dalka hooyo, kaa caawin kara dhismaha nolosha cusub. Hadii aad ubad leedahay waxa kale oo muhiim ah in aad ka fekerto aayahooda – gaar ahaan hadii ay ku dhasheen Denmark oo aanay hore u tegin dalka aad aad u socdaalaysol.
Xaqa ka noqoshada
Qaxoontiga ku noqonaya dalkiisii hore ee taageerada ku helaya xeerka dibunoqoshada, waxa u suurtagal ah in uu ka noqdo goaankiisa oo uu Denmark ugu soo noqdo dib 12 bilood gudahood laga bilaabo maalintii socdaalka – taas waxa lagu magacaabaa xaqa kanoqoshadaq.
Xaqa kanoqoshada waxa kale oo leh qoyska uu keeno qof qaxoonti ku ah Denmark – hase yeeshee waa marka uu qofkaasu ka dhoofayo Denmark ee uu ku soo noqdo Denmark, isaga oo weheliya qofka qaxoonti ahaan sharciga ugu leh Denmark.
Xeerarka ku saabsan xaqa kanoqoshadu way adag yihiin in la tilmaamo. Nagala soo xidhiidh warar dheeraad ah, hadii aad rabto in aad ogaato, in aad leedahay xaqa kanoqoshada.
Ma la dheerayn karaa xaqa kanoqoshada?
Xaqa kanoqoshada waxa lagu dheerayn karaa ilaaa 24 bilood arimo gaar ah awgood. Codsi ku saabsan dheeraynta waa in la soo diraa qiyaastii. 3 bilood gudahood ka hor intaanu dhamaan xiliga xaqa kanoqoshada ee sanadka kowaad. La heli maayo xaashishaxeed, waase in xaashi lagu soo qoraa goaanka saxa ah ee la gaadhay. Hay’adda shisheeyaha ka soo warbixinaysa in la yeelay dheeraynta xaqa kanoqoshada.
Codsiga dheeraynta waxa loo soo dirayaa boostada caadiga ah ee:
Codsiga waxa kale oo lagu soo diri karaa e-maylkanbortfald@us.dk.
Taageerada waxa la siiyaa kuwa u baahan taageerada
Sida ay yihiin adeegga kale ee bulshadu waxa lagu qiimeeya arimahaaga dhaqaan ee Denmark in aad xaq u leedahay in lagaa taageeru dibunoqoshadaada dalkii hooyo. Taa minaheedu waxa weeye, waxa aad taageero heli kartaa oo keliya, hadii aanad awoodi karin in aad iska bixiso geedigaaga dalkii hooyo. Maaha in aad xaq uun isaga leedahay in aad hesho taageero, hadii aad joojiso deganaashahaaga Denmark.
Dowladda hoose waa in ay qiimayn ku samaysaa dhaqaalahaaga si loo arko, in aad daw u leedahay taageero. Qiimayntaas waxa ka mid ah tusaale ahaan:
Hantida maguuraanka ah – Denmark iyo dalkaagii hooyo
Hantida hawlgabka iyo ATP’da
Dowladda hoose way diidi kartaa codsigaaga ku saabsan taageerada, hadii aad haysato in ka badan hanti qiimaysan – tusaale ahaan aad iibiso gaadhi oo aad qaadato kaydkaagii hawlgabka. Waxaad heli kartaa 50.000 DKK, hadii aad tahay keli iyo 100.000 DKK, hadii aad tahay xaas. Hadii aad haysato wax ka badan intaas, dowladda hoose waxay kartaa in ay diido codsiga taageerada ama waxay wax ka jaraysaa dhaqaalaha degista.
Hadii ay dowladda hoose ku qiimaysay in aad heli karto dhaqaalaha taageerada ee xeerka dibunoqoshada, waxay taageeradu ka koobnaan kartaa:
Kharashka socdaalka: tigidh sodaal keliya ee dalkii hooyo ama dalkii hore ee aad sharciga ku lahayd. Arimo gaar ah awgood waxay dowladda hoose siin kartaa tigidh siisocod iyo soosocod ah qofka weheliya, hadii uu ku saabsan yahay dad la wado oo da’ ah, bukaan iyo dadka caafimaad ahaan itaalka liita
Kirada gaadiidka hantida (ilaa 2 m³ qofkiiba)
Taageerada dejinta dalka hooyo (waxa loo kala siinayaa laba qaybood): 129.430 DKK qofkiiba ka weyn 18 sanadood (51.772 DKK waxa labixinayaa xiliga dhoofitaanka iyo 77.658 DKK joogista dalka hooyo 1 sanad ka dib). 39.473 DKK ilmihiiba (15.789 DKK waxa la bixinayaa xiliga dhoofitaanka iyo 23.684 DKK sanad 1 ka dib joogitaan dalka hooyo)
Dukaamaysi iyo gaadiid qalabka ganacsiga (ilaa 14.984 DKK qofka weyn iyo ilaa 19.353 DKK oo gaadiidka ah)
Gaadiidka qalabka ganacsiga ee uu haysto qofka noqonayaa (ilaa 14.984 DKK)
Kharashka 1 sanad caymiska caafimaadka dalka hooyo (6.450 DKK), hadii aanay dalka ka jirin hay’ad caafimaad. Lacagtaa waxa la bixiyaa 1 sanad ka dib arimo gaar ah awgood
Kharashka walxaha caafimaad ee la qaadanayo ugu badnaan ilaa 1 sanad adeegsigii
Kharashka taageerayaasha dawada qofka (ilaa 6.324 DKK) iyo talaalada lagamamaarmaanka ah
Taageerada ma loo magdhabayaa dib?
Adeegsiga xaqa kanoqoshada waxay dowladda hoose kaa dooni kartaa lacagtii taageerada ee laguugu ogolaaday dhoofistii dibunoqoshada dalkii hooyo – arimo gaar ah awgood.
Dhaqaale ee joogtada ah – dhaqaalaha dibulaqabsashada
Qaxoontiga aanay suurtagal u ahayn inuu isku filaado, waxa uu sii codsan karaa dhaqaalaha billaha joogtada ah. Taageeradu waxay noqon kartaa 5 sanadood ama lacag bileed waarta.
Shuruudo badan waa inuu qofku buuxiyaa si uu u helo lacagta dibulaqabsashada:
waa in uu qofku buuxiyaa 55 sanadood, ama; uu xaq u leeyahay in uu qaato hawlgabka hore (førtidspension), ama; waa inuu buuxiyaa 50
sanadood oo uu caafimaad ahaan awoodi kari waayay in uu isku filaado
waa in uu qofku haystaa sharciga deganaanshaha Denmark ugu yaraan 5 sanadood
Baaxadda taageerada dibulaqabsashadu sidoo kale waxay ku xidhan tahay in uu qofku xaas yahay oo hawlgabkiisi ku qaadan karo dalkiisii hooyo. Hadii uu codsaduhu sharciga dalka qaatay ka hor iyo 1. juulay 2002, wuxuu heli karaa lacag dheeraad ah.
Taageerada dhaqaalaha joogtada ahi wuxuu noqonayaa:
Kooxda 1: 2.500 DKK bishiiba 5 sanadood (ama 2.000 DKK bishiiba inta uu nool yahay) tusaale ahaa: Ciraaq, Afqaanistan, Somalia iyo Fiyatnam.
Kooxda 2: 3.500 DKK bishiiba 5 sanadood (ama 2.800 DKK bishiiba inta uu nool yahah) in: Bosnia, Lubnan, Turkiga iyo Serbia.
Kooxda 3: 4.500 DKK bishiiba 5 sanadood (ama 3.600 DKK bishiiba inta uu nool yahay) tusaale: Qatar, Sucuudiga iyo Kuwait.
Taageerada dheeraadka ah codsadaha sharciga dalka helay ka hor iyo 1. juli 2002 waa 1.000 DKK bishiiba 5 sanadood ama 800 DKK bishiiba inta nolosha u hadhay.
Latalin shakhsi ah oo hayadda qaxootiga deenishku ku siiso
Haddaad ka fikirayso, inaad dib ugu noqoto dalkaagii hooyo, waxaad hayadda qaxootiga ugu iman kartaa wadahadal lagugu siiyo latalin shakhsi ah. Ujeedada wadahadalku waa in lagu siiyo fursadaha suurtagalka ah aad ku qaadanayso goaankaas. Haddii aad u baahan tahay, waxa aannu kuu keenaynaa tarjubaan wadahadalka.
Inaad noo timaado oo naga la hadasho fursadahaaga, fikirkaaga iyo dareenkaaga, macnaheedu maaha inaad dib ugu noqonayso dalkaagii hooyo, laakiin waxa aad helaysaa wararka aad u isticmaalikarto qaadashada goaankaas. Wadahadalka ka dib xor ayaad u tahay, inaad Danmark sii deggenaato, inaad warar kale oo dheeraad ah sii raadiso si aad u qaadato goaanka, ama inaad rabto inaad dib ugu laabato dalkaagii hooyo (repatriere).
Haddaad rabto inaad wadahadalkaas la yeelato Hayadda Qaxootiga Deenishka, waa inaad buuxiso foom ku jira boggayaga intarnetka (oplysningsskema). Sidoo kale waad daabacan kartaa oo gacanta ku buuxin kartaa, dabadeed noogu soo diri kartaa boos caadi ah (halkan ka qaado - PDF).
Latalinta tilifoonka iyadoo aan cidi ku ogayn
Hayadda Qaxootiga Deenishka ayaa sidoo kale qaxootiga iyo doolka siin karta latalin dhinaca tilifoonka ah,oo la xidhiidha dib ugu noqoshada dalka hooyo, iyadoo aan la waydiin magacooda iyo qofka ay yihiin. Latalinta noocan ahi maaha mid ballaadhan, lagaga mana maarmi karo wadahadalka latalinta shakhsiga ah.
Caadi ahaan markasta waa la soo dhawaynayaa, inaad na soo wacdo oo na waydiiso wax kasta oo la xidhiidha fikirkaaga khuseeua safarka aad dib ugu laabanayso dalkaagii hooyo, sidoo kale – xataa tilifoonkana ku dhehoo – waxaad helaysaa latalin guud oo la xidhiidha fursadaha taageerada aad helayso iwm.